Linux dị ugbu a na 500 supercomputers | Site na Linux
Linux dị ugbu a na 500 supercomputers
Na nso nso e gosipụtara mbipụta nke 53 nke ọkwa nke kọmputa 500 (TOP500) nwere arụmọrụ kachasị elu n'ụwa. Na mbipụta ọhụrụ a bipụtara, ndị isi iri na abụọ agbanweghị agbanwe, ewepu nkwalite na ọkwa nke ise na ogo nke ụyọkọ Frontera ọhụrụ nke Dell mepụtara maka Texas Computer Center.
Theyọkọ ahụ na-agba ọsọ na sistemụ arụmọrụ nke CentOS 7 ma tinye ihe karịrị 448 puku cores dabere na Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz. Ọnụ RAM zuru ezu bụ 1.5 PB na arụmọrụ ahụ ruru 23 petaflops, nke dị okpukpu isii karịa onye isi nke elu a.
Ndi mmadu ndi IBM Deploys Summit Leading Group na Oak Ridge National Laboratory (USA). Yọkọ na-agba Red Hat Enterprise Linux, gụnyere 2.4 nde cores processor (iji 9-isi IBM Power22 3.07C 22GHz CPUs na NVIDIA Tesla V100 accelerators), na-enye 148 arụmọrụ petaflops.
Ebe nke abụọ ndị America Sierra Group biri, nke etinyere na Laboratory National Laboratory nke IBM dabere na ikpo okwu yiri Summit na dna-egosi arụmọrụ na 94 petaflops (ihe dị ka nde 1,5).
Nke atọ bụ ụyọkọ ndị China Sunway TaihuLight, na-arụ ọrụ na kọmpụta kọmputa mba nke China, nke gụnyere ihe karịrị 10 nde cores na na-egosi arụmọrụ nke 93 petaflops.
N'agbanyeghị ihe ngosi arụmọrụ ndị yiri ya, ụyọkọ Sierra na-erepịa ike okpukpu abụọ karịa Sunway TaihuLight.
Na nke anọ bụ otu ndị China Tianhe-2A, nke gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 5 ma gosiputa mkpụrụ nke petaflops 61.
Maka Top100, ọnụ ụzọ mbata si na 1703 ruo 2395 teraflops, ngụkọta nke usoro niile na ogo nke afọ mụbara site na 1.22 ruo na 1.559 exaflops (afọ anọ gara aga enwere 361 petaflops).
Intel CPUs na-ebute ụzọ: 95.6% (95% otu afọ gara aga), na-esote IBM Power na 2.6% (elu 3%), SPARC64 - 0.8% (1.2%) na ebe nke anọ, 0.4% na AMD 4th. (0.4%).
1.1 Sistemụ eji
1.2 Ndị na-emepụta ụyọkọ
Lomonosov 2, maka afọ, si na 72 gaa ebe 93rd na ogo. Theyọkọ ụyọkọ dị na Roshydromet dara site na 172 ruo 365.
Lomonosov na Tornado dị iche iche, nke dị na 227 na 458 otu afọ gara aga, wepụrụ na ndepụta ahụ.
Nkesa site na ọnụ ọgụgụ nke nnukwu kọmputa na mba dị iche iche, tụnyere nke ugbu a na otu afọ gara aga:
China: 219 (206 - otu afọ gara aga)
France: 19 (18)
Jémanị: 14 (21)
South Korea: 5 (7)
:Tali: 5 (5)
Nkesa nke ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ọnụ ọgụgụ nke kọmpụta buru ibu n'akụkụ dị iche iche nke ụwa dị ka ndị a: 267 supercomputers dị na Asia (261 afọ gara aga), 127 na America (131) na 98 na Europe (101), 5 na Oceania na 3 na Africa .
Na ogo nke sistemụ arụmọrụ ejis na supercomputers, ruo afọ abụọ naanị Linux fọdụrụ.
Nkesa nkesa Linux (nke ugbu a na afọ gara aga):
48.8% (50.8%) akọwaghị nkesa
27.8% (23.2%) jiri CentOS,
0.4% (0.4%) - Linux sayensị
Ndị na-emepụta ụyọkọ
Lenovo họọrọ nke mbụ: 34.6% (23.4% afọ gara aga)
Inspur weere ọnọdụ nke abụọ: 14.2% (13.6%)
Sugon 12.6% (11%) họọrọ nke atọ,
Hewlett-Packard - 8% (15.8%) si na nke abụọ gaa nke anọ
Cray dị nke ise na 7.8% (10.6%)
Oke ehi 4.2% (4.2%)
Mgbakọ Penguin - 1.8%
Onu uzo kacha nta iji banye Top500 mụbara n'afọ niile site na 715.6 ruo 1022 teraflops, nke ahụ bụ, ugbu a enweghị ndị nwere arụmọrụ dị ala karịa petaflops (otu afọ gara aga, naanị otu 272 gosipụtara arụmọrụ karịa petaflops, afọ abụọ gara aga, 138, afọ atọ gara aga, 94).
N'otu oge ahụ, ụdị ọhụrụ nke nhazi ọkwa nke graf 500 dị, nke na-elekwasị anya na ịtụle arụmọrụ nke nyiwe supercomputer metụtara nkedo nke usoro anụ ahụ na ọrụ nhazi maka nnukwu data setịpụrụ ụdị usoro ndị a.
A hapụkwaghị ogo ogo Green500 iche ma jikọta ya na Top500, dị ka arụmọrụ ike ugbu a gosipụtara na isi Top500 (A na-echebara atụmatụ LINPACK FLOPS na ike oriri na watts).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Linux dị ugbu a na 500 supercomputers
Wepụtara ọhụrụ version nke Alpine Linux 3.10, na akụrụngwa update